Monetizer: Ita mari yako Zvakasara, Geo-redirect kana Exit Traffic | Martech Zone
Monetizer: Ita mari yako Zvakasara, Geo-redirect kana Exit Traffic
China, August 25, 2016 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Tenda kana kwete, mushanyi wese kune yako saiti iri kwete tarisiro. Kana iwe waita mari yako saiti neyechitatu-bato kushambadzira, iwo ekushambadzira mapuratifomu anoda shanduko mitengo kuti ive hutano uye iratidze kushambadzira kune akakodzera vashanyi. Huwandu hwekuonekwa uye nzvimbo pane yako saiti zvinozivikanwa seako kushambadzira Inventory.
Chii chinonzi Chasara Traffic?
Sezvo kushambadzira kwakatengwa kwakanangwa, ko zvakadii nezvevasiiwa pane vashanyi vasina kunangwa? Iyo traffic inozivikanwa seyakasara traffic. Masara emigwagwa idambudziko kune vaparidzi vepamhepo nekuti traffic iyo ivo yavanotadza kuita mari.
Mumusika wanhasi wepamhepo wekushambadzira, vashambadzi vazhinji, vashambadziri, uye netiweki dzekushambadzira hadzisi kushandisa zvizere nharembozha uye webhu traffic yavanogadzira zuva nezuva. Pamusoro pezvo, vashanyi vanobva kunzvimbo dzisingatariswe vanogona kuenda kunoparara uye mikana yekuita mari mumigwagwa ichisiya mapeji evashambadzi hazviwanzo kuitika.
Sezvo zvingave zvakaoma zvikuru kuvhara chikamu chimwe nechimwe uye kugadzirisa makona ese paunenge uchiedza kuita mari isina-kunangidzirwa, kubuda, kana traffic yakasara, Monetizer inogadziriswa, yekugadzirisa mhinduro inogadzirisa nyaya iyi.
Monetizer inoita kuti vaparidzi vagadzire mushandirapamwe wakasarudzika, wakakwidziridzwa kwazvo kuitira kuti vaite mari mumigwagwa munyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu Iyo system inoshandisa imwe Global Smart Kubatanidza. Kudzidzira kwavo muchina kudzidza vAuto algorithm inofunga nezvevashanyi nzvimbo, mashandiro, uye mutakuri - pamwe nezvimwe zvinhu zvakawanda - kuitira kuburitsa inoshamisa eCPCs (yakawedzeredzwa mutengo-wega-kudzvanya) kune vatinoshanda navo.
Chikuva chedu chinoramba chichiburitsa zvakanakisa mhedzisiro, nevazhinji vadyidzani vachigadzira zviuru zvemadhora mumari zuva rega rega kubva kumatraffic izvo zvingangodaro zvisina kuenda kunogadziriswa. Sezvo isu tichiramba takatarisa kune tekinoroji iri kuseri kwepuratifomu, kukwidziridzwa kwemishandirapamwe, uye hukama hutsva nevashambadziri, tinofara kuona izvo iro ramangwana rakabata reMonetizer nevatinoshanda navo! Max Tetrault, Kugadzirisa Partner, Monetizer
Monetizer parizvino iri kuita mari ~ mamirioni zana nemakumi maviri emadhora / zuva uye ~ mabhiriyoni matatu kudzvanya / mwedzi kubva ku120+ nyika. Ivo vanokwanisa kuita monetize zvese nharembozha uye webhu (ese ari makuru uye evakuru traffic). Yadzo Global Smart Link inoshanduka, kusanganisira SEO-inoshamwaridzika sarudzo. Iyo Monetizer partner interface inopa chaiyo-nguva manhamba uye kuburitsa, pamwe nekubhadharwa kwevhiki kweyakagadzirwa mari kune vanobatirana.
Ndakavhunduka patakatanga kuvhura Monetizer. Iyo tekinoroji inoshamisa, sezvo ichiita mari traffic yatakatambura chaizvo munguva yakapfuura. Bert Xia, Bhizinesi Rekuvandudza Maneja, HonguMobi
Saina kumusoro kweMonetizer
Disiki: Monetizer parizvino irikushambadzira kushambadzira pane yedu saiti (ndozvandakavaona!)
Tags: kushambadzira kwekushambadzirakushambadzira uwandubert xiaecpcyakawedzera mutengo-wega-nekudzvanyamax tetraultmonetizervakasara trafficchii chinonzi vakasara trafficyeahmobi
Aug 26, 2016 pa 6: 07 AM
chinyorwa chikuru chekuti unga tarisa sei pamasara traffic !! ndichaedza !!